Home » Arts & Humanities » ဂိတ်စ် ရဲ့ မှာတမ်း နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း – “That is the moment when change is born”
"မွေးနေ့ဆုတောင်း" မီလင်ဒါ နဲ့ စု
အရီးရဲ့ အတင်းစပ်​ဆက်​ပုံ​လေးလှတယ်​။ ☺
Happy birthday to my (our) Lady.
အ ချိန် အ ခါ နဲ့ လျော် ညီ တဲ့ စာ တွေ ကို
အောင်ဆန်းစကားကြောင့် အစိမ်းချယ်ပြီဗျို့။ :-)))
The Lady အတွက် အကောင်းဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါပဲ မလတ်ရေ။
ဦးမိုက်သမီးလေးအတွက်တုန်းကလည်း အခုလိုပဲ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကို စဉ်းစားပြီး ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့တာ အားကျနေတာ။
ကျန်တာတွေကတော့ မပြောတော့ဘူး …. မပြောတော့ဘူး…. ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး။
မနက်နိုးကတည်းက Happy Birthday လို့ အိမ်မှာအကျယ်ကြီး ထအော်ထားတယ်…။
အရီးကွ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် မေစုမွေးနေ့လဲ ဆုတောင်း… ဟိုဟာဂျီးဒွေ မကောင်းဂျောင်းလဲပေါ်
.မနက်ကတည်းက အန်တီစုမွေးနေ့ကို သတိလဲရ ဆုလဲ တောင်းမိတယ်။
င်္FB မှာ အခုတလော ကြိုက်မိတဲ့ ဆရာမလေးကြည်စင်သန့်ဆောင်းပါးလေးက မလတ်ရေးတာနဲ့ သဘောချင်းနီးစပ်လို့ ရှဲပေးလိုက်ပါတယ်။သူကလေးကလည်း မလတ်လို အီကိုမိန်းမလှကျွန်းသူလေးပဲ။
အဓိကပြသာနာက ဆင်ခြင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ ပညာရေးကြီး ကြီးစိုးခဲ့တာက စပါတယ်ဒေါ်ဒေါ်။
ဒီ Post မှာ ဝင်ပြီး ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ သပေးသော သူများ ၊ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုသွားသူများ အားလုံး ကို ကျေးဇူး ဘီလျှံ ရဲ့ ဘီလျှံ ပါရှင့်။